Kuthatha ixesha elingakanani iCialis 20mg ukusebenza? | AASraw
/Blog/Cialis , tadalafil/Kuthatha ixesha elingakanani iCialis 20mg ukusebenza?
ezaposwa ngomhla 10 / 12 / 2017 by 阿斯劳 bha liweyo Cialis, tadalafil. Ibe 1 Comment.
ligama loshishino lonyango olubizwa ngokuba . I-Cialis yenye yeklasi yeziyobisi ezibizwa ngokuba yi-PDE-5 (i-Phosphodiesterase type 5) inhibitors. I-Cialis kunye namanye ama-PDE-5 inhibitors angancedisa amadoda ane-erectile (i-impotence yamadoda) ngokuphucula impendulo erectile xa umntu evuselelwa ngokwesondo. Ngaphandle kweCialis, ezinye iziyobisi kule klasi (Sildenafil) kunye Levitra (Vardenafil).
I-Cialis eluhlaza ipilisi isebenza njani?
I-Cialis powder eluhlaza ayibangela ukuba umntu avuke ngesondo. I-Cialis powder eluhlaza iya kusebenza kuphela xa umntu ekhutshweyo ngokwesini. Ukuqonda indlela i-Cialis eluhlaza ngayo isebenza ngayo kufuneka uqonde indlela osebenza ngayo umntu. Xa indoda ishukunyiswa ngesondo, inkqubo yeentlanzi kwiisisiti ze-erectile zepenis yakho ikhulula i-nitric oxide (NO). I-nitric oxide ivuselela i-enzyme eyenza 'umthunywa' obizwa nge-cyclic guanosine monophosphate (cGMP). I-cGMP ibuyisela kwakhona iiseli zesistim ezilula.
Esinye isiphumo salokhu kukuba imirhobho e-penis iyancipha kwaye igazi likwazi ukugeleza kwi-penis ngokulula. Esinye isiphumo kukuba i-erectile tissue izaliswa ngegazi. Zombini zezi nkqubo zikhokelela ekumiseni. I-Cialis isebenza ngokugcina izinga le-cGMP kwiiseli ezihamba kakuhle. Ukuba awuyi kuvuselelwa ngengqondo ngesondo, ingqondo yakho ayiyi kukhuthaza ukukhululwa kwanoma iyiphi i-nitric oxide kwaye awuyi kuvelisa amanqanaba e-CGMP.
Ngokomyinge, i-Cialis iya kusebenza ngehora nangona abanye abantu bebikile ukuba i-Cialis isebenza kakuhle emva kweeyure ezimbalwa. I-Cialis inokuhlala isebenza kakuhle kwiiyure ze-36. Oku akuthethi ukuba ulungiso luya kugcina ixesha elide - nje ngokuba uya kuba nakho ukufumana ukulungiswa okuphuculweyo kwelo xesha. Ngokungafani ne-Viagra, isidlo asiyi kulibazisa ukusebenza kwe-Cialis.
Ziziphi ezinye izibonelelo zonyango ezingafumanekiyo?
Amanye amayeza, kwaye Levitra sebenza ngeendlela ezifanayo. I-Cialis inomdla obunexesha elide ngakumbi kuneLevitra kunye neViagra kwaye ngoko umphumo wayo uhlala ixesha elide. Oku akuthethi ukuba indoda iya kuba nexesha elide kodwa ibudanga bexesha elifumanekayo ukwenzela ukwandiswa kokunyuka ngaphandle kokufuna ukuthatha amanani angaphezulu. Kwakhona kuthetha ukuba nangona kunjalo ukuba iziphumo ezichaphazelekayo ukuba ngaba zikhoyo ziya kuhlala ixesha elide. I-Cialis, njenge-Levitra, inokuthathwa ngokutya kanti i-Viagra kufuneka ithathwe kwisisu esingenalutho.
tags: bathenge i-Cialis powder, ukuthenga i-tadalafil powder, powder, tadalafil powder, umthengisi we-tadalafil
Asan06 / 19 / 2018 kwi-8: 59
Kukho usebenziso olubi lwe-erectile. I-Primary (inzala) ibonakalisa ukuba indoda ayizange ikwazi ukwenza ubulili. Oku kunqabile kakhulu. I-erectile i-dysfunction-eyona ndlela ixhaphakileyo, xa ixesha elikwimeko yobomi bobulili bomntu konke kulungile, kwaye kuphela ke kukho iingxaki zokumiswa. Unokusombulula ngokukhawuleza ingxaki: http://www.aasraw.com/contact/
Iyintoni i-yohimbine kwaye isebenza njani?	I-Cialis: Indlela Yokuyithatha kwaye Ixesha elide Lilala